Sajhasabal.com | Home‘कर्णाली’ नामै राख्न पनि कन्जुस्याइँ
प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो
धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न पुर्व उप–प्रधानमन्त्रीको जोड
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई प्रचण्डको यस्तो चेतावनी
सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरणका कार्ययोजना अगाडी बढाएको छु: मन्त्रि पोखरेल
५ वर्षे कार्यकाल भित्र केही न केही नयाँ कामहरु गरेरै छाड्छुः सांसद बोगटी
वडाध्यक्षविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा
महिलाद्वारा पत्रकारमाथि तेजाब प्रहार
अर्घाखाँचीमा १५ जना यात्रु बोकेको जिप दुर्घटना: चालकको मृत्यु
स्कुटर र जीप ठोक्किदा श्रीमतिको मृत्यु, श्रीमान गम्भीर घाइते
लोकसेवाको प्राविधिक तहमा दरखास्तै परेन !
प्रथम वडिगाड महोत्सवको तयारी चल्दै, विभिन्न उपसमित गठन
नयाँ उद्योगमा एक अर्ब बढी लगानीको प्रस्ताव
सामान्य अङ्कले घट्यो शेयर बजार
आजको सुनचाँदीको बजारभाउ कति ? हेर्नुहोस्
साउदी, कतार, युएई, मलेसिया लगाएत अन्य देशहरुको पैसाको मुल्य बढ्यो
नेपाली गजलमा राहुल र अलिशाको रोमान्स (भिडियोसहित)
नेपाल आइडलबाट बाहिरिएकी मेनुकाले भारतीय शोमा देखाईन यस्तो चमत्कार (भिडियो)
सुशान्त सिंह राजपुतलाई सेक्सुअल हृयारेसमेन्टको आरोप, शेयर गरे पर्सनल च्याट
निशान भट्टराईको ‘मंसिर महिनामा’ ट्रेन्डिङमा (भिडियोसहित)
मृत्यु कुरिहेका ति करोडौ मिनिमिनीहरुको आत्मा (फोटो फिचर)
श्रम मन्त्री विष्टलाई सुझाव - 'लामो समयसम्म मलेसिया कामदार पठाउन नरोक्नुस्'
देश असुरक्षाको भूमरीमा
"नेपालमा राजनितिक दण्डहिनताको गैरजिम्मेवारी पराकाष्ठा : हत्या, बलात्कार....!"
ज्वालामुखी गाउँपालिका भित्रको भ्रष्टाचार छताछुल्ल, स्थानीय पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण होस्
‘कर्णाली’ नामै राख्न पनि कन्जुस्याइँ
रमेश रावल । कर्णाली ‘ट्रेडमार्क’ का रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । पहिले कर्णालीको नाम सुन्नसम्म पनि नचाहनेहरुले अहिले कर्णालीका विषयलाई यति गहन बनाइदिएका छन् कि कर्णाली उनीहरुको भाग्य र भविष्य दुबै हो ।
हिजोका दिनमा ‘हटारु’, ‘जुम्ली’ इत्यादि शब्दले कर्णालीलाई हेप्ने गरिन्थ्यो । आज कर्णाली विकासको बाटोमा अगाडि बढेको छ । कर्णालीका वस्तुले देश–विदेशमा बजार पाउन थालेका छन् । तिनै कर्णालीका ‘हटारु, ‘जुम्ली’ हरुले उत्पादन गरेका वस्तु निकै महँगा छन् । सिमी, फापर, कोदो, स्याउ, आलुको सबैभन्दा अर्ग्यानिक स्वादिलो स्वाद पाएका छन् । यिनै स्वाद चाख्न पाएकाहरु अहिले जताततै ‘कर्णाली ट्रेडमार्क’ निर्माण गरेर बेचिरहेका छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने जडीबुटी यार्सागुम्बालगायतको भण्डार कर्णालीमा नै छ । पर्यटन, जलविद्युत, चीन र भारतलाई जोड्ने कर्णाली करिडोर बन्दै गरेको छ । त्यसैले हिजोका दिनमा ‘हटारु’, ‘जुम्ली’ भन्नेहरुले नै अहिले जताततै कर्णालीलाई ‘ट्रेडमार्क’ का रुपमा विकास गरिरहेका हुन् ।
संघीय संरचना बनाउँदा कर्णालीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै त्यहाँ चर्को आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनमा सहिद हुनेहरुलाई बिर्सन सकिँदैन । कर्णालीकै छुट्टै संघीय प्रदेश चाहिने भन्दै आन्दोलनमा देशभरका सबैको एउटै स्वर थियो– ‘कर्णाली विकट र पिछडिएको क्षेत्र हो, यसलाई छुट्टै संघीय प्रदेश दिनुपर्छ ।’
सबैको दवाबले कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला र भेरी अञ्चलका ३ जिल्ला जोडेर प्रदेश नम्बर ६ बनाइयो । प्रदेश नं. ६ बनाइएपछि खुशियाली छायो । त्यसपछि यसको राजधानी कता बनाउने भन्ने विषयमा कुरा उठ्यो । नाम र राजधानीको विषयमा पहिले माओवादीले आफ्नो प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला गर्दै प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने र सुर्खेतमा राजधानी राख्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि भर्खरै नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत हुने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले मात्र औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ । पहिलो त संघीयतामा ६ नम्बर प्रदेश बनाउँदा कर्णालीका ५ जिल्ला, सेती अञ्चलको बाजुरा र भेरी अञ्चलको जाजरकोट तथा दैलेख जिल्ला समेटेर बनाइनुपर्थ्यो । यो भूगोल मिलाएर संघीय प्रदेश बनाएको भए यहाँको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन, भौभलिक विकटता, मानव विकासको सूचकाङ्क, यहाँको अभाव, गरिबी र विकास सबै कुरा मिल्थ्यो ।
यहाँका धेरै कुरा मिल्न सक्थे । यो नै उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, सर्खुेतलाई पनि कर्णाली प्रदेशमा जोडियो । सुर्खेतलाई कर्णाली प्रदेशमा जोडिएपछि यस प्रदेशका पहाडी जिल्लामा काम गर्ने अपवाद बाहेक सबै शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरु, पत्रकार, गाउँका धनीमानीहरुले सुगमताका आधारमा सुर्खेतमा घर–घडेरी खरिद गरेका छन् । उनीहरुका लागि सुगमता छ र कर्णालीमा कमाएको रुपैयाँ सुर्खेतमा राखिएको छ । यसै आधारमा कर्णालीको राजधानी सुर्खेत हुुनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
हाम्रो एउटा प्रश्न छ– संघीयता भनेको सबै क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, क्षेत्रमा समान अधिकार र पहुँच पुर्याउनका लागि होइन ? अनि कसरी सुर्खेत कर्णालीको राजधानी हुन सक्छ ? तर, अहिले एउटा बहस नै नगरी आफ्नो फाइदाका लागि कर्णालीलाई उपेक्षा गर्न खोजिँदैछ । नाम सबै कर्णालीको, कर्णाली अझै उही पुरानै शैलीमा फर्काउने र बन्ने स्थिति यहाँ देखिन्छ । अहिले प्रादेशिक राजधानी रुपमा जुन भनिएको छ ।
सेवा सुबिधाका हिसाबले सुर्खेतमा सबै कुरा छ । उच्च शिक्षा पढ्नका नजिकै बिश्वबिद्यालय, स्वास्थ्य उपचार सुबिधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल लगाएतका छन् । बिगत शासन ब्यवस्थामा सबैकुरा एकै ठाउँ केन्द्रीत भए त्यसलाई बिभाजन गर्न संघियता चाहिएको हो । संघियतामा बाजुराका रुगिन, बिच्छाया गाउँ, जाजरकोटका जुर्क र निपाने, मुगु हयाङ्ल्लु गाउँका मानिसलाई स्वास्थ्य शिक्षा पहुँच पुग्छ कि पुग्दैन ? बहस यहाँबाट गरिनु पर्दछ ।
यसरी बहस गरिएमा साच्चै पछाडी परेको कर्णालीको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य अधिकार पुग्ने देखिन्छ । नत्र भने, संघियता फेरी पनि टाठाबाठाका कै लागि हो र संघियताका नाममा अरुलाई भ्रम नपारियोस् । त्यसैले ‘हटारु’ ‘जुम्ली’ शब्दलाई बद्लेर कर्णालीले केही पाउँदैन् ।
सरकारले कर्णाली विकास अबधारणा नै गलत तरिका अपनाएको छ ।
सरकारीले कर्णाली विकास लागि भनेर छुटाएको बजेट, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा लगाएतका विकासे योजना दिर्घकालिन विकास अबधारणा कर्णाली मैत्री छैनन् । कर्णालीमा जडिबुटी प्रसोधन केन्द्र अन्तै खोल्ने तयारी गरिएको छ । कर्णालीका नाममा खोलिएको बिश्वबिद्यालय अन्तै छ । कर्णाली नाममा स्वास्थ्य संस्था खोलिएका छन् ती सबै अन्त छन् । अनि कर्णालीमा लागि सरकारले गरेको काम के हो त ?
कर्णालीमा अहिले केहीले राम्रो संम्भवना देखेका छन् । पर्यटनको राम्रो संम्भावना रहेको छ । साना लगानीमा ठुला ठुला जलबिद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न सकिनेछ । जडिबुटी खेतीको राम्रो संम्भवना रहेको छ । गेडागुडी खेती, पशुपालनको राम्रो संम्भवना रहेको छ । यी कर्णालीका राम्रा संम्भावना देखेर नै अहिले जताततै कर्णालीको ट्रेडमार्क बिक्रि गरिरहेका छन् ।
सबैलाई चेतना भया कर्णालीको ट्रेडमार्क बेचेर कर्णालीको विकास अवश्य हुदैँन् । कर्णालीको विकासका लागि कर्णालीमा नै लगानी मैत्री बातावरण सिर्जना गरौं । कर्णालीमा विकास मुल फुटाऔं अनि मात्र कर्णालीको विकास हुन सक्छ । त्यसैले सबैले कर्णालीको नाम लिएर वा एउटा ट्रेडमार्कको विकास गरेर कर्णालीलाई हिजोआजको झन कंगाल नबनाऔं ।
त्यसैले सरकार, राजनीतिक दलहरु, दातृनिकाय, एनजीओ–आएनजीओलगायत सबैले कर्णालीको ट्रेडमार्क बेचेर संघीय प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राख्ने विषयलाई अझै पछाडि पार्ने खेल नगरौं । कर्णालीलाई हिजो ‘हटारु र जुम्ली’ भनेर अपमानित गरिएको कुरालाई सच्याएर साँच्चै कर्णालीका रुपमा विकास गर्न सबै कर्णाली केन्द्रित भएर लागौं ।
(रावल कालिकोटका एक क्रियाशिल पत्रकार हुन्)